Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » US VP Kamala Harris ao amin'ny NASA momba ny asa momba ny toetr'andro maika
Ny hamehana ny siansa momba ny tany sy ny fandalinana ny toetr'andro dia nisongadina androany zoma raha nitsidika ny Foiben'ny sidina Space Goddard NASA any Greenbelt, Maryland ny filoha lefitra Kamala Harris. Ny filoha lefitra dia nahazo fijery mivantana momba ny fomba fandalinana ny fiovan'ny toetr'andro ny fandaharan'asan'ny habakabaka ao amin'ny firenena ary manome fampahalalana manan-danja mba hahatakarana ny fiovan'ny planetantsika sy ny fiantraikany eo amin'ny fiainantsika.
Nandritra ny fitsidihana, ny administratera NASA Bill Nelson dia nanambara ny sary voalohany avy amin'ny Landsat 9, iraka iraisan'ny NASA sy ny US Geological Survey (USGS) natomboka tamin'ny faran'ny volana septambra. Ny sary dia mampiseho an'i Detroit miaraka amin'ny Lake St. Clair mpifanolo-bodirindrina, morontsiraka Florida miova, ary faritra ao amin'ny firenena Navajo any Arizona. Izy ireo dia hanampy amin'ny haren'ny angon-drakitra manampy antsika hanara-maso ny fahasalaman'ny voly sy ny rano ampiasaina amin'ny fanondrahana, mitantana ny harena voajanahary tena ilaina ary manara-maso ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro.
Ireo sary vaovao, izay rehetra azo tamin'ny 31 Oktobra, dia manome angona momba ny fiovan'ny tontolon'ny Himalayas sy Aostralia, manampy amin'ny firaketana angon-drakitra tsy manam-paharoa an'i Landsat izay maharitra efa ho 50 taona amin'ny fijerena ny Tany amin'ny habakabaka.
"Mino aho fa ny hetsika an-habakabaka dia hetsika momba ny toetrandro. Ny asa an-habakabaka dia fanabeazana. Ny asa an-habakabaka dia fitomboana ara-toekarena ihany koa. Fanavaozana sy aingam-panahy ihany koa izany. Ary momba ny fiarovana sy ny herintsika izany ”, hoy ny filoha lefitra. “Raha ny momba ny hetsika an-habakabaka no resahina, dia tsy misy fetrany ny fahafaha-manao. … Noho izany, rehefa miala eto isika, dia aoka isika hanohy hanararaotra ny habakabaka.”
Harris sy Nelson koa dia niresaka momba ny fanambaran'ny NASA momba ny Earth Venture Mission-3 (EVM-3) vaovao. Ny fanadihadiana momba ny Convective Updrafts (INCUS) dia handinika ny fivoaran'ny oram-baratra tropikaly sy ny oram-baratra, izay hanampy amin'ny fanatsarana ny toetr'andro sy ny toetr'andro.
"Ny manam-pahaizana momba ny NASA ankehitriny dia nanome anay ny fomba maro ilaintsika mba hahatakarana tsara kokoa ny planetantsika, manomboka amin'ny hain-tany sy ny hafanana an-tanàn-dehibe, mankany amin'ny ranomasina sy ny faritra maro hitanay miova avy any an-danitra," hoy i Nelson. "Ny fitantanan'i Biden-Harris dia manolo-tena handroso marina amin'ny krizy momba ny toetrandro mba hahazoana tombony amin'ny taranaka ho avy, ary ny NASA no ivon'ny asa."
NASA, miaraka amin'ny National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ary USGS, dia anisan'ireo masoivoho federaly manao fikarohana momba ny toetrandro ary manome angon-drakitra momba ny toetr'andro ho an'ny masoivoho sy fikambanana manerantany. Ny toetr'andro mahery vaika sy ny toetr'andro - anisan'izany ny hain-tany, ny tondra-drano ary ny doro tanety - dia lasa mitranga matetika. Ny hevitra avy amin'ny habakabaka dia manampy antsika handalina ny planetantsika amin'ny maha-rafitra iray mitambatra mba hahatakarana ireo trangan-javatra ireo sy hanasoa ny olona any amin'ny toerana misy azy.
Ny filoha lefitra dia nihaona tamin'ny mpahay siansa sy injeniera mba hiresaka momba ny fomba ahafahan'ny portfolio midadasika an'ny NASA amin'ny iraka siantifika an-tany manampy amin'ny famahana ny olan'ny toetr'andro atrehin'ny tontolontsika.
Ny hetsika siantifika momba ny tany midadasika an'ny NASA dia ahitana zanabolana miasa miaraka amin'ny masoivoho hafa. Anisan'izany ny NOAA sy ny USGS, izay nanana solontena teo an-tanana nihaona tamin'i Harris.
“Amin'ny folo taonany izao, ny fiaraha-miasa NOAA-NASA dia mametraka ny teknolojia tsara indrindra eran'izao tontolo izao amin'ny habakabaka hanatsarana ny fahafahan'ny firenena manara-maso sy maminavina ny toetr'andro sy ny toetr'andro eto an-tany,” hoy ny mpitantana ny NOAA Rick Spinrad, Ph.D. "Ny ekipan'ny NOAA sy ny manam-pahaizana NASA miaraka amin'ny NASA Goddard dia mampandroso ny zanabolana geostationary ho an'ny firenentsika, antsoina hoe GOES-R, izay mamokatra angona tena ilaina ho an'ny vinavina marina sy ara-potoana izay mamonjy aina ary manampy ny olona hifanaraka amin'ny fiovan'ny toetr'andro."
"Ny sary mahasarika ny Landsat 9 sy ny angona siantifika fototra dia hanampy ny Atitany hitantana tsara kokoa ny tanin'ny firenentsika sy ny loharanon-karenantsika, hitahiry ny lovantsika ara-kolontsaina, hanome voninahitra ny andraikitsika amin'ny fitokisana amin'ny teratany Amerikana sy ny teratany, ary hamahana ny krizy amin'ny toetr'andro," hoy i Tanya Trujillo, departemanta. ny sekretera lefitry ny Atitany momba ny rano sy ny siansa. "Isan'andro, ny arisivan'ny angon-drakitra Landsat efa ho 50 taona tantanana sy nozarain'ny USGS an-kalalahana dia manome hevi-baovao sy fanohanana fanapahan-kevitra ho an'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta, mpanabe ary orinasa mba hahatakarana tsara kokoa sy hitantana ny tontolontsika miovaova."
Nandritra ny fitsidihany, Harris dia nanao sandry robotika nandalo fitsapana ho an'ny iraka fandoroana solika ao amin'ny orbit amin'ny zanabolana Landsat 7. Io zanabolana io amin'izao fotoana izao dia mandalina ny Tany ho ampahany amin'ny fiaramanidina Landsat.
Nitsidika ny iraka Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem (PACE) ihany koa i Harris, izay misy fitaovana iray eo am-panamboarana amin'izao fotoana izao ao amin'ny Goddard amin'ny fandefasana 2022. Ny PACE dia hampandroso ny fahaiza-manao fanombanana ho an'ny fahasalaman'ny ranomasina amin'ny alàlan'ny fandrefesana ny fizarana phytoplankton - zavamaniry bitika sy ahidrano izay mamelona ny tranokala sakafo an-dranomasina. Naseho ihany koa ny programa GOES-R, izay ny satelita GOES-T dia nokasaina halefa ho an'ny NOAA amin'ny Febroary 2022 mba hanatsarana ny vinavinan'ny toetrandro.